CUMFLOW.NET: ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ ခဏကြည့်ပေးပါ Please wait.
ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ ခဏကြည့်ပေးပါ Please wait.
google check our www.dotekyimaung.blogspot.com ( www.dkmxxx.com)
So please wait and watch this site in moment. Sorry for .....
It will take3or4days long.
ဒီဆိုက်မှာပဲ ခဏကြည့်ထားပါ။ ကားတွေကို ဆိုက်ကြီးမှာတင်သလိုပဲ တင်ပေးပါမယ်။သုံးလေရက်ကြာနိုင်တယ်။ အပြောင်းအလည်းတွေကို cumflow.com မှာလည်း တင်ပေးသွားမယ်။ ဒါတွေကို ကြိုမြင်လို့ ဆိုက်ခွဲတွေထားထားပြီးသား ပို့စ်တွေအကုန်သိမ်းထားပါတယ်။
မပူပါနဲ့ အရင်လို ပြန်ပြီးလည်ပတ်ဖို့ အားလုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်။ အိပ်ရေးတော့ပျက်ပြီဗျာ။ ဘောပွဲလေးနိုင်လို့ ပျော်ရမလားအောက်မေ့ပါတယ်။ တိုင်ကပတ်ဦးမယ်။ ကဲ....ဆုတောင်းပေးကြဦး ရတော့လည်း ရပေါ့။ မရတော့လည်း back up ပေါ့။ Newer Post